First and Only Russian Restaurant KVAS Yangon 1545 views
ဒီနေ့ MyLann မှ အသစ်သွားပြီးစားခဲ့တဲ့ Russian ဆိုင်အသစ်စက်စက်လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပါရစေ။ အမည်က KVAS လို့ခေါ်ပြီး ရန်ကုန်မှာ ပထမဦးဆုံး Russian စားသောက်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ မှာစားခဲ့တာတွေကတော့ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ အမဲသားစွပ်ပြုတ်၊ Russian စတိုင် အမဲသားဟင်း၊ Mozarella Cheese နှင့် သံလွင်ဆီတို့ရောပြီး မီးအေးအေးနှင့်ကင်ထားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်စုံဟင်းတို့ပါ။ အရသာတွေက အရမ်းထူးခြားပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တယ်ဟု ယူဆရပါတယ်။ ဆိုင်လေးက အနည်းငယ်ကျဉ်းပေမဲ့ Service ရော၊ အရသာရော၊ ကျန်းမာရေးအတွက်ရော ကောင်းမွန်တဲ့အတွက် Recommend ပေးပါတယ်။ သွားပြီးမြည်းကြည့်ကြပါ။
ရန်ရှင်းလမ်း (ရွှေအုန်းပင်အိမ်ယာအနီး)၊ ရန်ကင်း၊ ရန်ကုန်။
Today, we want to introduce to all MyLann friends withabrand new Russian restaurant & bar. It is claimed as the very first and only Russian food place ever opened in Yangon. We ordered Borscht (Tomato, Beet, & Pork Soup), Beef Stroganoff & Russian Casserole. They were all amazing and unique, in addition to their healthy taste. After we had our dinner, we felt very satisfied. Well recommended. Please go and try.
Yan Shin Road (Near Shwe Ohn Pin Housing), Yankin, Yangon.
More details about KVAS can be checked here.